Faransiiska oo adkaynaya ammaanka - BBC Somali - Warar
Faransiiska oo adkaynaya ammaanka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 13 Janaayo, 2013, 21:03 GMT 00:03 SGA
Ciidamada Faransiiska ee jooga Mali.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande, ayaa sheegay inuu adkayn doono ammaanka dalka Faransiiska si looga hortago weerar kadib markii ciidamada Faransiiska ay hawlgalo ka fuliyeen Soomaaliya iyo Mali.
Mr Hollande ayaa sheegay inay jiri doonaan ilaalin dheerad ah goobaha bulshada iyo gaadiidka dadwaynaha.
Dalka Mali ciidamada Faransiiska waxay weerar cirka ku qaadeen maleeshiyada islaamiyiinta.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in ay qasaaro u gayteen cadawgooda laakiin aysan howsha wali dhamaan..
Ciidamada dowladda Mali ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen magaalada Konna iyagoo kaashanaya ciidamada Faransiiska. waxay sheegeen inay dileen ilaa boqol islaamiyiin.